ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးချာချာလည်သွားတယ် – Hlataw.com
ခင်ယုလွင်ဟူသည့် အမည်ကို သောကြာနေ့ညက မ…ဆီလာကြိုရန်ဖုန်းဆက်ချိ်န်တွင်သူစကြားဖူးခြင်းဖြစ်သည်။ သူကြား ဖူးဖူးခြင်း နှာခေါင်းရှုံ့မိသော အမည်ဖြစ်၏၊ မ ကအိမ်တွင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရောက်နေ၍ သိပ်မကဲရန်ဖုန်းဆက်က တည်းက ကြိုမှာသည်။ တစ်ပတ်လုံးအောင့်အီးထားရ၍တင်းမာနေသည့် အားအင်များ ရှုံ့တွသွားသလိုခံစားလိုက်ရ၏ ။နှာခေါင်းရှုံ့လည်း ရှုံ့ချင်စရာပင်ဖြစ်၏်၊ မ ကမိတ်ဆက်ပေး၍စတင်တွေ့တွေ့ချင်းမှာပင်သူ့ကိုခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့် ကာ လဲ့ကောင်လေးက အကိတ်လေးပဲဟုဆိုသည်၊ အိမ်နေ၀တ်စားပုံကိုက ပလေးဗွိုင်းမော်ဒယ်များရှုံးလောက်၏၊ ခါးကျဉ်းသော်လည်း သွယ်၍ကားသွားသည့် တင်ကို ဇီးရိုးပန်တစ်ထည်ထဲဖြင့် မနိုင့်တစ်နိုင် ဖုံးထားသည်၊ မ လောက်အ သားမဖြူသော်လည်း ညက်ညော၍အချိုးကျသည့်ပေါင်သားများက မက်မောလောက်စရာဖော်ပြနေသည်၊ အဖြူရောင်တီ ရှပ်ဖြင့် တင်းကြပ်စွာစီးနှောင်ထားသည့်အတွက်။
အလုံးအထည်ကြီးသည့် ရင်သားမို့မို့များက အလုံးလိုက် ပြူးထွက်နေ ၏၊၊ အနားတိုသောတီရှပ်ကြောင့် လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတွင်ဗိုက်သားဖွေးဖွေးက ၀င်းခနဲလက်ခနဲပေါ်ပေါ်လာတက်သည်၊ ရိုးရှင်းစွာဝတ်စားတတ်သော မ ထက် ဆွဲဆောင်မှုကောင်းနေသည်ကိုတော့ ငြင်း၍မရပေ။ အဆိုးဆုံးက သူမ၏မျက်လုံးများပင်ဖြစ်သည် သူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးအကဲခတ်နေသည့်အတွက် တစ်ခါတစ်ခါ သူမ၏အလှ အပများဆီသို့ကြည့်မိသည့် အချိန်မျိုးတွင် ပိုမို၍လှစ်ဟပြတတ်သည်၊ မ မရိပ်မိစေ ရန်အတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်း နေရ၏။ မ ကတော့သူနှင့်ဆေးကျောင်းတက်စဉ်ကတည်းကတူတူနေခဲ့သော သူငယ်ချင်း၏စရိုက်များအားရိုးနေဟန်တူသည်။ ကျွန်တော်ကသာ ခပ်အမ်းအမ်းရှိနေခဲ့သည်။တိုက်ခန်းတွင်းအခန်းကန့်စနစ်မှာ အုတ်နံရံမဟုတ်သည့်အတွက် ထိုနေ့ညက မ နှင့်ချစ်တင်းနှောစဉ်တွင် ယခင်က လောက် မလွတ်လပ်တော့ပေ၊ တစ်စုံတစ်ဦးရှိနေသည်ဟူသည့်အသိက ချုပ်တည်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ချုပ်တည်းမှုရှိ သည်နှင့်အ မျှ အပြီးကြာလေတော့၏ တစ်ချက်တစ်ချက် စိတ်လွတ်သွား၍ ကြမ်းမိချိန်များတွင် မ ကအားရစွာအော်ညည်းတတ် သည်၊ သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ဖက်ခန်းတွင်ရှိနေသည်ကို မေ့နေသယောင်ယောင်၊တစ်ဖက်ခန်းမှတစ်ယောက်ကလည်း သူ တို့နှစ်ဦး၏ လှုပ်ရှားမှုများအားမသိဘဲနေမည်မဟုတ်၊ သူမတို့နှစ်ဦး၏ပွင့်လင်းမှုက အံ့လောက်ပေသည်။ သူမသုံးလေးခါပြီးသွားသည့်တိုင် တစ်ကြိမ်မျှမပြီးသေးသည့်သူ့အား မ ကစိတ်မရှည်စွာဖြင့် မှုတ်ပေးတော့သည်၊ တစ်ဆုံး မြိုချ၍ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆွဲဆွဲစုပ်သည့်အတွက် အရသာက ဆိမ့်အီကျင်တက်လာသည်၊ သူအံကိုကြိပ်ခေါင်းကိုမော့၍ အရ သာအားအပြည့်အ၀ခံစားစဉ် ခပ်ဟဟဖြစ်နေသည့် ဆွဲတံခါးကြားမှချောင်းကြည့်နေသည့်မျက်ဝန်းတစ်စုံကိုမြင်လိုက်ရ သည်၊ ချက်ချင်းတံခါးပြန်စေ့သွား၏၊သူခေါင်းနဘမ်းကြီးသွားသည်၊မကတော့ သူ့ကိုကုန်းစုပ်နေ၍ မမြင်နိုင်ပေ၊ ဟိုတစ် ယောက် သူတို့ကိုချောင်းကြည့်နေတာသေချာသည်။
ဘယ်ကတည်းကချောင်းကြည့်နေလဲမသိ၊ မီးမှိတ်ထားသော်လည်း နံရံမီးမှိန်မှိန်ကြောင့် သူတို့နှစ်ဦး၏ အ၀တ်မဲ့ခန္ဒာကိုယ်များအားကောင်းစွာမြင်နိုင်သည်၊ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေသည့်သူတို့ နှစ်ဦးကိုအရသာခံ၍ကြည့်နေချင်းဖြစ်သည်၊ ထိုစဉ် မ ကဥများကိုလက်ဖြင့် နယ်ကစား၍ ခပ်သွက်သွက်မုတ်ရာ ပေါင် တွင်းသားများတင်းလာ သည်အထိ စိမ့်တက်လာပြီး မပါးစပ်တွင်းသို့ကော့ကော့ထိုးကာ ပန်းထုတ်လိုက်တော့သည်။ တံခါးပိတ်စဉ်က သူကိုယ်တိုင်လော့ခ်ချခဲ့သည်ကိုမှတ်မိသည်။ မည်သို့ဖွင့်သည်ကို စဉ်းစား၍မရ၊ အ၀တ်ပင်ပြန်မ၀တ်နိုင် ဘဲ သူ့လက်မောင်းပေါ်ခေါင်းအုံး၍ ကွေးကွေးလေးအိပ်ပျော်သွားသည့် မအားမမေးဖြစ်လိုက်တော့ပါ၊ သူမသိလျှင်ရှက် ကောင်းရှက်သွားနိုင်သည်၊သူမပြောရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်၏၊ ရဲတင်းလှသည့်ထိုမိန်းမ၏ လုပ်ရပ်ကို စဉ်းစားနေမိသည်။ မ နှင့်တစ်အိမ်တည်းနေကျောင်းတက်ခဲ့၍ ဘယ်လောက်ပဲရင်းနှီးနှီး သည်လောက်ထိတော့ မစပ်စုသင့်ပေ။
အလုပ်နေရာ ကြောင့်နယ်ပြောင်းသွားပြီး မှရန်ကုန်ရောက်တုန်းလာလည်သည်ဆိုသော်လည်း သူမ၏အပြုအမူများကြောင့် စိတ်အ နှောက်အယှက်ဖြစ်ရသည်၊ သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီး ထိုကိစ္စကိုခေါင်းထဲမှထုတ်ကာ အိပ်လိုက်တော့သည်။ထိုနေ့ညက …မ၏မွေးနေ့ဖြစ်သည့်အတွက် ရုံးပိတ်ရက်မဟုတ်သည့်တိုင် မတို့ရှိရာတိုက်ခန်းသို့သူသွားဖြစ်ခဲ့သည်၊ ပြီးခဲ့သည့်ညက အဖြစ်အပျက်ကြောင့် ခင်ယုလွင်ရှိလျှင်သူမသွားတော့ဘူးဟုဆုံးဖြတ်ထား သော်လည်း မ ကလာဖို့မှာထားပြီး၊ သူက လည်းမအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးချင်နေသည့်အတွက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်၏၊ မအတွက်မွေးနေ့ကိတ်တစ်လုံးဝယ်လာ ခဲ့သည်။သူရောက်တော့ မ တို့နှစ်ဦးကအစားအသောက်များပြင်လျှက်စကားလက်ဆုံကျနေ၏ ၊ ခင်ယုလွင်က ယမန်နေ့ကလောက် အတိုအပျက်များမ၀တ်တော့ဘဲ ညအိပ်ဂါဝန်ကိုလုံလုံခြုံခြုံဝတ်ထားသည်၊ သို့သော်လည်း မြင်သူထိပ်စိုစေမည့် သူ့ဘော် ဒီကိုည၀တ်ဂါဝန်ကပုံဖျက်မပေးနိုင်ရှာပေ။
ခြေကလိန်ချိတ်ထိုင်ထားသည့်တိုင် ဂါဝန်စ အပွင့်များအားဖျောက်၍ ဖြည့် တွေးကြည့်ရုံမျှဖြင့် ကိုယ်လုံးတီးအနေအထားကို ပုံဖော်ကြည့်၍ရနေသေးသည်။ မ ကတော့အနက်ရောင်ထမီနှင့် ဆင်ဆွယ်ရောင်တီရှပ်ခပ်ပွပွလေးကိုဝတ်ကာ ရိုးရိုးလေးနှင့်လှနေသည်၊ သနတ်ခါးကို ဖွေးနုနုပါးပြင်တွင် ဟိုတစ်ကွက်သည်တစ်ကွက်တို့ထားသေး၏၊ သူ့မွေးနေ့ကိတ်ကိုမြင်တော့မပျော်သွားသည်။ ခင်ယုလွင်က အောင်မယ်လေး မင်းခန့် ရယ် .. မင်းမမက ဘတ်ဒေးညကို ပါတီလုပ်မလို့စီစဉ်ထားတာ မင်းက ကလေးပေါက်စန လေးတွေလိုကိတ်မုန့်လှီးခိုင်းမလို့လား သူ့မျက်နှာကွက်ခနဲပျက်သွားမိသည်၊ ဒါကို မ ကမြင်တော့ … ဖြေပြောပေးရှာသည် အို .. ယုကလည်း လဲ့ကကလေးပဲဥစ္စာ မောင်ကလဲ့ကိုကလေးလေးလိုပဲမြင်လို့နေမှာပေါ့ .. နော်မောင် ..မဟုတ်ဘူး လား ကဲ ဟုတ်ပါဘီ မွေးကင်းစကလေးလေးနှစ်ယောက်ရယ် ကိုယ်လုံးတီးချွတ်အနှီးပတ်ပြီး နို့သာစို့နေကြပါတော့။
မကသဘောကျစွာရယ်သည်၊သူလည်း အလိုက်သင့်ပြုံးလိုက်၏၊ ထိုမိန်းမဘာကိုဆိုလိုမှန်း မ မသိသော်လည်းသူသိသည် မ၏မွေးနေ့တွင်ပြသနာမတက်စေချင်ပါ၊သူက မွေးနေ့ကိတ်ကိုဖယောင်းတိုင်များ စိုက်၍ မရှေ့သို့ယူလာပေးလိုက်သည်၊ ပြီးတော့သူတို့သုံးဦး ဘတ်ဒေးသီချင်း ကိုဆို၍ မကဖယောင်းတိုင်မီးကိုမုတ်လိုက်၏။ မ က ကလေးငယ်တစ်ဦးကဲ့သို့ပျော်ရွှင် စွာလက်ခုတ်တီးသည်။ကိတ်မုန့် တစ်တုန်းကိုလှီးပြီး သူ့ကိုအရင်ခွန့်သည် ပြီးတော့ ခင်ယုလွင်ကိုခွန့်သည်။ခင်ယုလွင်ကကိတ်မုန့်စားပြီး .. ကဲ ကဲ ချစ်စရာ့အရွယ်ကစားကြမယ်အစီအစဉ်ပြီးရင် ရင့်စရာ့အရွယ်သောက်ကြမယ်အစီအစဉ်စမယ်ဟေ့..လာဘီ ဘေးကို … ဟုဆိုကာ စပိုင်ဝိုင်တစ်ကဒ်ကိုရေခဲသေတ္တာထဲမှထုတ်လာသည် ဒီမိန်းမကတော့ တစ်အားကိုသောက်ချင်နေတော့တာပဲ .. မောင်ရောစပိုင်ကြိုက်ရဲ့လား .. သူခေါင်းခါမိသည်၊သူ ၀ိုင်နှင့်မတည့်ချေ၊မ သူ့ကိုလက်ဝါးကလေးကာပြရင်းအခန်းထဲသို့ဝင်သွား၏။
ပြန်ထွက်လာတော့ ချီးဗက်စ်တစ်ပုလင်းပါ လာသည် ဒါနဲ့တော့ တည့်တယ်မဟုတ်လား ပုလင်းကိုသူ့ရှေ့ချပေးသည်၊မဆီမှာ ဒါမျိုးဘာလို့ရှိနေပါလိမ့် မက ဘယ့်နှယ်အရက်ပုလင်းကြီးဆောင်ထားရတာလဲ သူအံ့သြစွာဆိုတော့ မကရယ်ကျဲကျဲဖြင့်ဖြေသည် ဆေးရုံအုပ်ကြီးကို ကန်တော့ဖို့ဝယ်ထားတာမောင်ရေ .. မကန်တော့ဖြစ်လိုက်လို့ပိုနေတာ .. မောင့်အတွက်ဖြစ်သွား တာပေါ့ သောက်သောက် မင်းခန့်ရေ .. ချီးဗက်စ်က အချစ်ခွန်အားကိုတိုးပွားစေတယ်ဆိုလား .. ကြားဖူးတာပဲ ခင်ယုလွင်အရွှန်းဝင်ဖောက်သည်၊ မက ခင်ယုလွင်လက်မောင်းကို တစ်ဖျောင်းဖျောင်းရိုက်၏၊ ခင်ယုလွင်က မ၏ တင်ပါးလေးကိုပြန် တွယ်သည်။သူမ တို့နှစ်ဦး အနေအထိုင်ရင်းနှီးလွန်းကြသည်။ စတွေ့သည့်နေ့ကလည်း စသလိုလိုနောက်သလိုလိုနှင့် ခင်ယုလွင်က မ၏နို့ကိုဆွဲလိမ်သည်ကိုတွေ့ဖူးသည်၊ အတူတူနေစဉ်က ပွင့်လင်းခဲ့သူ များဖြစ်ခဲ့ကြသလားမပြောတတ် .. သူအ ထင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
အသင့်ရှိသည့် အစားအသောက်များဖြင့် သူတို့သောက်စားကြသည်၊ သူမတို့ကကျောင်းတုန်းက အဖြစ်အပျက်များကို ပြောကြရင်းစကားလက်ဆုံကျသည်၊ သူကတော့နားထောင်သမားလုပ်ရင်း သောက်၏၊ ခွက်ထဲကအရက်ကုန်လျှင် မက ငှဲ့ထည့်ပေးသည်၊ မ မအားလျှင် ခင်ယုလွင်ကထည့်ပေးသည် ၊ထွေလာသည်နှင့် သူလည်းစကားဝိုင်းထဲသို့ဝင်ပြော၏၊ ခင်ယုလွင်က ပွင့်လင်းရဲတင်းလွန်းသော်လည်း ခင်ဖို့ကောင်းပါသည်၊ စကားဝိုင်းက တောရောက်တောင်ရောက်နှင့် မပျက် နိုင်သကဲ့သို့ သူ့အရက်ခွက်အတွင်းမှအရက်သည်လည်းမပျက်တမ်းငှဲ့ပေးကြသည် ၊သူတို့လည်းသောက်၏ ၀ိုင်တစ်ကဒ် ကုန်သည်အထိဖြစ်သည်၊ ပုလင်းကိုလှန်းရှိုးလိုက်တော့ သူတစ်ယောက်တည်းဖြင့်တစ်ဝက်ကျိုးနေပြီ၊မျက်လုံးပြူးသွား၏။ အ၀င်ကောင်းကောင်းနှင့်လှိမ့်တွယ်နေသော်လည်း အမှန်ကသူအဲ့လောက်မသောက်နိုင်၊ ထပ်သောက်လျှင်ဒေါင်ချာစိုင်း တော့မည်၊ခင်ယုလွင်ကထပ်ငှဲ့ပေးဖို့ပြင်နေသေးသည်။
သူလက်ကာပြလိုက်၏ တော်ဘီအစ်မ ကျွန်နော်မသောက်နိုင်တော့ဘူး သူ့နုတ်ထွက်စကားတို့လေးနေသည်၊အရက်ရှိန်ကယဉ်ယဉ်လေး နှင့်တစ်ရိတ်ရိတ်တက်လာပြီးဖြစ်၏။ မက သဘောကျနှစ်ခြိုက်စွာပြုံးသည်။ခင်ယုလွင်က ကဲကဲ မွေးနေ့ရှင်ကြီးရေ .. နင့်အသဲလေးကိုသိပ်မှရတော့မယ်နော် .. ငါတို့အိပ်ရာကိုချီပို့ပေးနေရအုံးမယ် ခင်ယုလွင်ပြောတာဟုတ်သည်၊သူတော်တော်မူးနေပြီးဖြစ်သည်၊သူ့ကိုထူပေးသည့် မမျက်နှာတို့ေ၀၀ါး၍နှစ်ကိုယ်ကွဲကွဲသွား သည်၊ မျက်မှန်ကြောင့်လားထင်မိ၍ ချွတ်ပြီးကြည့်တော့လည်းပို၍သာမှုန်သွားသည်၊ ယခင်အတိုင်းဝါးဆဲပင်ဖြစ်၏၊ မကသူ့ကိုတွဲ၍အိပ်ယာသို့ပို့ပေးသည်၊မူးနေသည့်တိုင် သူလော့ခ်ကိုသေချာစွာချခဲ့၏၊ အိပ်ယာသို့ရောက်သည်နှင့် မကို လှဲချလိုက်ပြီးအနမ်းတွေချွေတော့သည်၊ အမူးရှိန်ကြောင့်ထူအမ်းနေသည့် သူ့နုတ်ခမ်းများကို မကမွတ်သိပ်စွာပြန်လည် တုန့်ပြန်၏။ သူမလဲ စပိုင်အစွမ်းဖြင့် အမ်းနေလောက်၏၊မ၏ တီရှပ်ပွပွကိုအလောတကြီးဆွဲချွတ်မိသည်။
သည်တစ်ကြိမ်တွင်တော့ မ ကပန်းနုရောင်ဘရာလေးဝတ်ထားသည်၊ သူ မ၏ထမီကိုလည်းဖြေလျှော့ကန်ချွတ်၍ သူ့ရှပ်အကျီနှင့်ပုဆိုးကိုချွတ်ပေးသည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးတွင် အတွင်းခံများသာ ကျန်တော့၏။ကုတင်ပေါ်ပက်လက်ကြီးလှန်နေသောသူ့ကို မကပဲစ၍ပျိုးပါသည်။ လည်ပင်းသားများအားနမ်းစုပ်၏ နောက် ရင်အုပ် သားများကိုလျှာလေးဖြင့်တို့ကာတို့ကာရက်သည်၊ နို့သီးကိုငုံစုပ်သည်၊အနမ်းများက တဖြည်းဖြည်းဆင်းလာကာ နောက်ဆုံး အတွင်းခံအောက်မှရုန်းကန်နေသည့် သူ့ညီလေးဆီသို့ရောက်သည်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုလှန်ချွတ်လိုက်ပြီး ထိပ်တွင်ဆို့တက်နေသည့်အရည်ကျည်များပါး စပ်ဖြင့်ဦးစွာဆွဲစုပ်လိုက်သည်၊ ဖရှူး .. ခနဲ မြည်ကာအရည်များအကုန်အစင် မပါးစပ်ထဲပါသွား၏၊သူမနုတ်ခမ်းလေးကိုလျှာဖြင့်သပ်လိုက်သည်။ မ အရသာကြိုက်လား သူ၏တိန်ဝင်နေသည့် အမေးကို မကမဖြေဘဲ မျက်နှာကိုစေ့စေ့စိုက်ကြည့်၍ ဖုံးနေသည့်အ ရေပြားကို နုတ်ခမ်းတို့ဖြင့်တွန်းထုတ်တိုက်ဆွဲကာ ငုံလိုက်သည်။
သူကော့တက်သွား၏ …ထို့နောက် ပါးစပ်မှပြန်ချွတ်၍ ထိပ် ဖူးသားတစ်ဝိုက်အား နုတ်ခမ်းသားများ ဟစိဟစိလုပ်ခါ ပွတ်ဆွသည် ။မေးကျောများထောင်လာသည်အထိ ကောင်းလာ ၏၊ ပါးပြင်းထောင်လိုက်သည့် မြွေဟောက်တစ်ကောင်နှယ် ထိပ်သားနီနီကြီး ကားထွက်လာတော့သည်။ ထိုစဉ် .. အိမ်ရှေ့ခန်းမှဖုန်းမြည်သံနှင့်အတူ ခင်ယုလွင်၏ခြေသံကြားလိုက်ရသည်။ ကျန်ခဲ့သည့်မ၏ဟန်းဖုန်းမှ ဖုန်းလာခြင်း ဖြစ်မည်၊ သူ့မျက်မှန်လဲ အိမ်ရှေ့တွင်ကျန်ခဲ့သည်ကိုသတိရမိသည်။ လဲ့ရေ .. မင်းဖုန်းလာတယ် .. ကိုင်လိုက်ရမလား နေ နေ တို့ကိုပေး ဒီချိန်ကြီးကျမှ ဘယ်ကဖုန်းလဲ .. ဆေးရုံကဆက်တာလားမသိဘူး မ သူ့ထိပ်ဖူးကိုပါးစပ်မှခွာ၍ ထသွားသည်။ ဖုန်းကိုတံခါးအနည်းငယ်ဟ၍ ယူလိုက်၏၊ လေသံနိမ့်လေးဖြင့်ပြောနေသည်။ တံခါးကိုခနတာ ဟလိုက်သည်ကိုပင် သူ့ဘက်ကိုကြော်၍ကြည့်လာသည့် ခင်ယုလွင်၏မျက်လုံးများလက်ခနဲဖြစ်သွားသည် ကိုတွေ့ဖြစ်အောင်တွေ့လိုက်သေးသည်။
မ .. ကွာ .. ဘယ်သူနဲ့ပြော မ၏ တိတ်တိတ်နေရန် လက်ညှိုးလေးနုတ်ခမ်းတွင်ကပ်၍ ပြလိုက်သည့်အပြုအမူကြောင့်သူ့စကားတန့်သွားသည်။ ထို့နောက် မက ဖုန်းကိုချ၍သူ့နှဖူးကိုနမ်းကာတိုးတိုးလေးပြောသည်။ ဆေးရုံကဆက်တာမောင် .. မွေးလူနာအရေးကြီးလို့တဲ့ .. မ ခနသွားရမယ် .. ဆောရီးနော် ..ပြန်လျော်ပေးမယ်.. အိုခေ ဟာကွာ .. မကလဲ သူစိတ်ပျက်စွာဆိုမိသည်။မက အ၀တ်အစားများကဗျာကသီလဲ၍ မပြန်လာခဲ့မယ် .. နော် စိတ်မကောက်ရဘူး .. ဘယ်သူကမွေးနေ့ရှင်လဲ အိုခေ အိုခေ .. မြန်မြန်ပြန်လာခဲ့ .. မောင်ကစောင့်နေမှာနော် သူ့ညီလေးကိုကိုင်ပြပြီးပြောတော့ မက ဖလိုင်းကစ် ပုံလေးလုပ်ပြပြီး ထွက်သွားသည်။ သူစိတ်ပျက်ခြင်းကြီးစွာကျန်ရစ်၏၊ မူးရီဝေသည့်အသိတို့က နောက်ကျိတက်လာသည်၊ မျက်လုံးစင်းစင်းတို့တစ်ချက်မှေး သွား၏။ဖင်ဝမှစွတ်စိုနွေးထွေးသည့်အထိအတွေ့တစ်ခုကြောင့် သူဖျက်ခနဲလန့်နိုးလာသည်၊သူ့ခါးအောက်တွင်ခွခေါင်းအုံးတစ်ခု ရောက်နေ၏။
ခွခေါင်းအုံး၏ထောက်ကန်ပင့်မထားမှုကြောင့် ဒူးထောင်ပေါင်ကားဖြင့် ဖင်ကအနည်းငယ်မော့နေသည်။ထိုမော့နေသည့် ဖင်အား ဖြဲ၍ လျှာဖျားချွန်ချွန်ဖြင့်စိန်ပြေနပြေ ကလိနေခြင်းဖြစ်သည် ၊ထောင်မတ်နေသေးသည့် သူ့အတံအား လက်ဖြင့် ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုပ်နယ်နေသေးသည်။ ကောင်းလွန်းသည့်အတွေ့ကြောင့် သူမျက်လုံးများပြန်လည်မှေးစင်းထားမိသည်၊မ ထိုကဲ့သို့တစ်ခါမျှမလုပ်ပေးဖူးချေ၊ ဆေးရုံမှပြန်လာပြီး အလျော်ပေးနေခြင်းဖြစ်မည်။တစ်ချက်တစ်ချက် လျှာဖြင့်အတင်းထိုးသွင်းသေးသည်။ကျစ်ထားလိုက် ရ၏၊ မဘာကြောင့်ဒီလောက်ဆိုးနေပါလိမ့်။ ဖင်ဝအားလျက်နေရာမှ အစွမ်းကုန်ထောင်မတ်လာသည့် ထိပ်ဖူးကိုပြောင်းစို့သည်။ လက်ကလည်းအငြိမ်မနေ ဥနှစ်လုံး ကိုညှစ်၍ ဆွဲခါ၏။ ထိပ်ဖူးကိုအားကုန်စုပ်ခါ အဆုံးအထိဆွဲကပ်မြိုချလိုက်သည်၊သူမျက်လုံးများ ပြူးကျယ်ဝိုင်းစက်သွား သည်အထိ ဂွတ်သွား၏၊ ကောင်းလိုက်တာ မ ရယ် … ဟာ .. ခင်ဗျား…..။
ခင်ယုလွင် သူ့ခေါင်းမွှေးများထောင်သွားသကဲ့သို့ခံစားလိုက်ရသည်၊ သူ့ ကို အ၀တ်အစားတစ်စွန်းတစ်စမျှမပါသည် ကိုယ်လုံးတီးဖြင့် စိန်ပြေနပြေ မုတ်ရက်နေသူမှာ ခင်ယုလွင်ဖြစ်သည်။ မ ကောင်းဘူးလားဟင် .. အစ်မလုပ်ပေးတာမကောင်းဘူးလား .. ကြိုက်ရဲ့လား .. မင်းမမ မလုပ်ပေးတာတွေ အစ်မ အကုန်လုပ်ပေးမယ်နော် ညုတုတုအသံဖြင့်ဆိုကာ ဥများကိုငုံစုပ်ပြန်သည်။ အာ့ .. မကောင်းဘူးအစ်မ .. မကောင်းပါဘူး မ ပြန်လာလိမ့်မယ် ပြသနာတက်လိမ့်မယ် မကောင်းဘူးဟုဆိုသော် လည်း သူကော့ခံနေသည် ၊လက်များဖြင့် ခပ်ပြင်းပြင်းဂွင်းတိုက်ရင်း ခင်ယုလွင်ဆိုပြန်လေ၏ ပြသနာမတက်စေရပါဘူးမောင်လေးရယ် .. မင်းမမကမိုးလင်းမှပြန်လာမှာ .. မကိုတစ်ခေါက်လောက်တော့ကျွေးပါ ကွာ .. နော် .. မင်းကို မြင်ကတည်းကစားချင်နေတာ .. ဟော့ဒီမင်းဟာကြီးကိုအစ်မအရမ်းဆာနေတာ .. အားရလိုက် တာကောင်လေးရယ် ထွားလိုက်တာ ပြောပြောဆိုဆို တစ်ချောင်းလုံးငုံစုပ်ပြန်၏။
တစ်ဗျွတ်ဗျွတ်မည်အောင် ပါးစပ်ထဲဆောင့်ဆောင့်သွင်းသည် သူ့ ရမက်တို့ ဟုန်းခနဲကြွတက်လာသည်။သူမ၏အပြုအစုတို့က ရုန်းထွက်ရခက်နေ၏၊ တော်ဘီဗျာ .. ကျွန်နော်ပြန်တော့မယ် .. မကိုသစာမဖောက်နိုင်ဘူး .. မကိုဘဲချစ်တာ ခင်ယုလွင် ဗျူဟာပြောင်းလိုက်သည်၊အစုတ်ရပ်လိုက်ပြီး သူ့အပေါ် ခြောက်ကိုး ပုံစံတက်ခွလိုက်ကာ ဖင်ကြီးကိုရမ်းပြ၏။ ဒီမှာကြည့်စမ်း မင်းခိုးခိုးကြည့်နေတဲ့ အစ်မရဲ့ဖင်ကြီးလေ ကြိုက်ရဲ့လား .. ကျေးဇူးပြုပြီးပေးပါကွာ .. မင်းတို့ဟို နေ့ကလုပ် နေတာခိုးကြည့်ပီး အစ်မတအားဆာနေလို့ပါ .. မင်းတို့ကိုခိုးကြည့်ရင်း အစ်မတစ်အားယားလာလို့ ဖင်ထဲ ကိုလက်သုံးချောင်းပူးပြီးထည့်ထားရတယ် မင်းသိရဲ့လား တစ်အားယားနေလို့ပါကွာ ဖင်မချချင်ဘူးလား .. ဖင်ခံမယ် လေ .. အစ်မဖင်ကြပ်ကြပ်လေးကို ချပေးပါကွာ တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ယုလွင်၏အပြောအဆိုများက ပတ်စက်လွန်းသည်။ အရှက်ကင်းမဲ့လှသည်ဟု ခံစားရသော်လည်း ပက်ပက်စက်စက် ပြော တာ ကြီးကိုက စိတ်တို့ကိုထကြွလာစေသည်။
ကဲ .. ဘယ်ယောက်ျားသားရုန်းထွက်နိုင်မှာလဲ၊ ဒီလိုအခြေအမင်းခန့်ကိုသူဘယ်လိုမှရုန်းမထွက်နိုင်တော့ပါ သူ့မျက်နှာနား တွင်ရမ်းနေသည့် ဖင်သားဖွေးဖွေး နှစ်ခြမ်းကြားမှ ခံချင်လွန်းလှပါသည်ဆိုသော ဖင်ဝလေးကိုကိုင်ကြည့်မိသည် စူ၍ကျစ် နေ၏၊ ကော့ထနေသည့် တင်ပါးလှလှကြီးများအား စုံကိုင်၍ ထိုအ၀ကျပ်ကျပ်ဖင်လေးကိုချချင်စိတ်များ ဟုန်းဟုန်းထလာ တော့သည်။ကဲဗျာ .. ဒါဆိုမြန်မြန်လုပ်ကြရအောင်နော် မ ပြန်လာလိမ့်မယ် ခင်ယုလွင်ပျော်သွား၏ သူ့ဗျူဟာအောင်မြင်သွားပြီ မျက် နှာဘက်ပြန်လှည့်လာ၍ နုတ်ခမ်းများကိုအငမ်းမရနမ်းစုတ်တော့၏ ။ မြန်မြန်တော့မလုပ်ပါရစေနဲ့ကွာ မင်းဟာကြီးရဲ့အရသာကိုတစ်ဝကြီးခံစားလိုက်ချင်လို့ပါ.. မင်းမမ မသိစေရပါဘူး ကတိပေးတယ် .. မင်းမျက်နှာပေါ်တက်ခွမယ်နော် ကန်တော့ ဖင်ခံလို့ကောင်းအောင် အစ်မကိုထရွလာတဲ့အထိ စွပေး နော် ရော့အင့် စို့ ဟုဆိုကာ သူ့မျက်နှာပေါ်တက်ခွ၍ သူ့အဂါဇတ်ကိုအတင်းခွံတော့သည်။
နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်နေရာကိုအတင်းကပ်ဖိထား၏ သူမ၏ဖင်သားကြီးနှစ်ခုကြားတွင်မျက်နှာမြုတ်သွားသည်။ သူအသည်းယားစွာ အစိနေရာအား အားရပါးရစုပ်မိသည်၊ ဒါကိုသူမက ကော့ကော့ထိုး၍ပွတ်တင်၏၊ မျက်နှာကိုကောင်းကောင်းအပွတ်ခံနေရသည်။ လျှာကိုတစ်ဆုံးထုတ်၍ အခေါင်းထဲမွှေပေးချိန်တွင် သူက မွှေ့မွှေ့ဆောင့်သည်။ ရှူး … အား .. ကောင်းလိုက်တာမောင်လေးရယ် .. အစ်မသေချာဆေးထားတယ်နော် .. မရွံနဲ့ ..ဖင်ခံချင်လွန်းလို့ ၀မ်း ပါချူထားတယ် .. ရက်ရက် အားးး…အို့ဂွတ် မောင်လေးရယ် တစ်ကိုယ်လုံးတစ်ဆစ်ဆစ်နဲ့တက်လာဘီ အာ့.. အီး ဖင်ကိုကောက်ခါ မျက်နှာကိုအားရပါးရဆောင့်ရင်း အော်ညင်း၏၊ သူ့အသံကြားရလေ မာန်ပိုတက်လေဖြစ်သည်။ အိုခေ အိုခေ အစ်မ တစ်အားထလာဘီ မင်းကိုပြန်ဆွပေးမယ်နော် ထိပ်ကြီးပြဲလန်နေအောင် ထွားလာမှ ခံလို့ကောင်း တာကွ သိလား သူ့အတံကိုမုတ်ပြန်၏၊ တံတွေးများလည်းထွေးချသည်။
သူမတံတွေးများဖြင့် ပြောင်လက်ခါ အကျောများပြိုင်းပြိုင်းထလာ တော့သည်။ ထို့နောက်ကုတင်စွန်းတွင် ဖင်ကိုထောင်ကုန်းလိုက်ပြီးကဲလာ .. မောင်လေး .. စိတ်ရှိသလောက်သာချတော့ .. အစ်မ ခံနိုင်တယ် ဟုဆိုသည်။သူက ဒီလောက်ရှိတဲ့ဟာမ ဖင်ကွဲအောင်ဆော်မယ်ဟုစိတ်တေးကာ ကုတင်အောက်ဆင်းပြီး သူ့ဖင်နားသို့ကပ်လိုက်သည်။ ကြွရွ၍ အရည်များယိုစီးကျနေသည့် အဂါဖောင်းဖောင်းကြီးအထက်မှစူပွပြွုဖစ်နေသောဖင်ဝကိုဖြဲ၍ တံတွေးများများထွေး ထည့်လိုက်သည် အို့ ချွဲလိုက်တာမောင်လေးရယ် .. စစချင်းဖြေးဖြေးသွင်းနော် ..၀င်သွားမှစိတ်ကြိုက်လုပ် ဖင်ကားကားကြီးကိုထောင်ရမ်းလျက်သူ့အားဆရာလုပ်နေသေး၏၊ဖင်ဝကို ထိပ်ဖူးဖြင့်ခပ်ဆပ်ဆပ်လးနှစ်ချက်ရိုက်လိုက် ပြီးမှတေ့လိုက်သည်၊ နွေးထွေးသည့်ထိပ်ဖူး၏အတေ့ခံလိုက်ရသည့်အတွက် ခင်ယုလွင်အိပ်ရာခင်းစတို့ကိုဆွဲကိုင်လိုက်၏၊ ဖိသွင်းလိုက်သည်။သူမဖင်ဝကိုတင်းခံမထားဘဲ ခပ်လျော့လျော့ဖြင့်ကြိုဆိုသောကြောင့်ထိပ်ဖူးမြုပ်သွား၏။
တင်းကြပ်စွာ စီးနှောင်သည့် ဖင်အတွေ့ကိုခံစားလိုက်ရသည်၊ကောင်းလိုက်သည့်ဖြစ်ချင်း ၊သူအားရစွာထပ်မံ၍ဖိသွင်းသည် ၊ဒီတစ်ခါ မရပ်တော့၊စည်းကျပ်သည့်ဖင်ထဲသို့ တံတွေးများ၏အကူအညီကြောင့်တစ်ရစ်ရစ်ဖြင့် တစ်ချောင်းလုံးဝင်သွားသည်။ ခင်ယုလွင် အာ့ .. ဟား …ဟုအသံရှည်ဆွဲညည်းညူကာ ကော့ထွက်သွားသည်၊ဖင်ခံရသည်ကိုတော်တော်ကြိုက်ပုံရ၏။ တစ်ဝက်ခန့်ပြန်ဆွဲထုပ်ပြီး သုံးလေးခါ အသွင်းအထုပ်လုပ်သည်၊ ကြပ်ထုပ်ထုပ်ကြီးဖြင့်စီးလှသည်။သူအားရစွာဖင်သား တစ်ခြမ်းအား လက်ဝါးဖြင့် တစ်ဖြန်းဖြန်းနေအောင်ရိုက်လိုက်သည်။ အာ့ အာ့ …. ရှီး …. ကောင်းတာ့ မောင်လေးရယ် မင်းလုပ်တတ်သားပဲ ခင်ယုလွင်အံကြိပ်သံကြီးဖြင့်ထောပနာပြုသည်၊ ဖင်ရိုက်လိုက်သည့်အတွက် စအိုဝ ရှုံရှုံသွားမှုက တစ်ချောင်းလုံးကိုဆွဲဆွဲ ညစ်စေသည်၊ သူမနေနိုင်တော့ ဖင်သားကြီးနှစ်ခြမ်းတုန်ခါရမ်းသွားသည်အထိ အားရအောင်ဆောင့်တော့သည်။
ခင်ယုလွင် ကလည်း သူမဖင်အား တစ်လကြမ်းချနေသည်ကို နာကျင်ပုံမပေါ် အားရနှစ်ခြိုက်စွာ အော်ညည်းနေတော့သည်။ အချက်နှစ်ဆယ်ခန့်ဆောင့်အပြီး ခင်ယုလွင်က သူ့ထိပ်ဖူးအားချွတ်၍ သူ့အားလှဲအိပ်စေသည်။ပြီးမှ သူ့မျက်နှာဘက်သို့ဖင်ပေး၍ နှစ်မြောင်းကြားရှိ ရှေ့အဂါနှင့်တေ့ကာထိုင်ချလိုက်၏၊ ဖင်ကြီးကိုကော့ကော့စောင့်တော့သည်။ အာတာတာဖြစ်နေသည့် ဖင်ဝထဲသို့သူ့လက်ချောင်းများထိုးသွင်းစေ၏၊အရသာအစုံ ဖြင့်ဇိန်ခံသည့်မိန်းမဟုမှတ်ချက်ပြုမိသည်။ ထို့နောက် ထိပ်ဖူးကိုဖင်ဝသို့ပြန်သွင်းကာ စောင့်ပြန်သည်၊တင်းကြပ်ပြည့်သိပ်လွန်းသည့် ဖင်ဖြင့် အားပါပါစောင့်သည့်အ တွက် တစ်ချောင်းလုံးထူပူတက်လာသည်အထိကောင်းလှသည်။ ဖင်ဝကိုကြိပ်ထိုင်၍ စကောဝိုင်းပေးနေသေးသဖြင့် ထိပ် ဖူးကသူမ၏ဖင်ထဲတွင် ပတ်မွှေ့နေ၏။ဒါကို သူမက အစေ့ပွတ်၍ ဇိမ်ခံသည် ။နောက်ဆုံးဆောင့်ကြောင့်ထိုင်၍ ဖင်ဖြင့် အားရပါးရဆောင့်လေသောအခါ။
တင်းကားလှပလှသော အိုးကြီး၏ တုန်ခါဆောင့်ချရမ်းခါနေသည့် အမြင်အာရုံ ၊ ဖင် သားကြီးနှစ်ခြမ်းဗြန်းဗြန်းမြည်အောင် ဆောင့်ချနေသည့်အတွက် ဆီးဆပ်နှင့်ရိုက်ခတ်မိသည့် အသံများ သူမ၏အားရ စွာ အော်ညည်းသံများ စသည့် အကြားအာရုံ စီးကြပ်သည့်ဖင်၏ ဆွဲဆုပ်အားဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်ချသည့် အထိအ တွေ့အာရုံတို့ကြောင့် သူထွန့်ထွန့်လူးလာသည်၊ ဒါကိုသိသော ခင်ယုလွင်က ဖင်ဝမှအတင်းချွတ်၍ ကုတင်ခြေရင်းတွင်ဒူး ထောက်ထိုက်ကာ ပြီးတော့မယ်မှတ်လား လာ ဒီကိုလာ အစ်မမျက်နှာပေါ်ပန်းချလိုက် အစ်မနို့တွေပေါ်ပန်းချလိုက် မင်းဟာကြီးက အရည်တွေပန်းထွက်လာတာကိုကြည့်ချင်လို့ အားရအောင်ကြည့်ချင်လို့ သူဆွဲမချွတ်လျှင်ပြီးတော့မည်မို့ ခနအောင်ပြီး ဒူးထောက်ထိုင်ကာနုတ်မတတွတ်တွတ်ပူဆာနေသည့် သူမ မျက်နှာနှင့် နို့အုံဖွေးဖွေးကြီးနှစ်လုံးပေါ်သို့ ဂွင်းထုကာ အောင့်အီးထားသမျှ လက်ကျန်မရှိအောင် တစ်ဗျစ်ဗျစ်ဖြင့်ပန်းချလိုက်တော့ သည်။
မောင် …. မ၏အသံဖြစ်သည် ….သူ့တစ်ကိုယ်လုံးလေဟာနယ်ထဲရောက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရ၏၊ စောက်ရှက်မရှိကြဘူး … မ မျက်နှာကိုလက်ဖြင့်အုပ်ခါအော်လိုက်သည်။ သူတို့နှစ်၏ပုံစံကလည်းကြည့်အုံး ချွေးများရွှဲနစ်နေသည့် အ၀တ်မပါကိုယ်လုံးတီးများဖြင့် တစ်ယောက်၏မျက်နှာပေါ်သို့ တစ်ယောက်က သုတ်ရည်များပန်းထုတ်နေသည့်အချိန် တန်းမိခြင်းဖြစ်၏၊ မ အသားတို့တစ်ဇက်ဇက်တုံနေသည်၊မျက်ရည်များမြင်မကောင်းအောင်ကျနေ၏၊အသံကားမထွက်တော့။ သူ့လည်း ရှင်း ပြချင်သည် ပါးစပ်ထဲအာစေးထည့်ထားသလို ဘာအသံမှထွက်မလာတော့။ခင်ယုလွင်တစ်ဦးသာအသံထွက်လာသည်။ သူငယ်ချင်း .. တို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါကွာ .. မင်းကောင်လေးကိုမြူဆွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး .. သူအတင်းလာတောင်းနေလို့ စိတ်ကျေနပ်အောင် ကျွေးမိတာပါကွာ။
တောင်းပန်ပါတယ်နော် ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့ ဒို့စိတ်အလိုမလိုက်သင့်ဘူး ဒို့ကိုခွင့်မ လွှတ်ပါနဲ့နော် သူပါးစပ်အဟောင်းသားဖြင့်နားထောင်နေမိသည်၊မိန်းမများ၏ နာမည်ကြီး မာယာ ဆိုသည်ကို အခုမှရှင်းရှင်ကြီးမြင်တွေ့ လိုက်ရသည်၊ ဆွံအနေသည်၊ဘာမှပြော၍မထွက်တော့၊ကြိုးစား၍ပြောကြည့်သည်၊ မ .. မဟုတ်ဘူး .. သူပြောတာမဟုတ်ဘူး .. မောင်ရှင်းပြပါရစေ တော်ဘီ ကိုမင်းခန့် ရှင်ဘာမှမပြောနဲ့တော့ .. အားလုံးပြီးသွားဘီ .. ကျွန်မရဲစခန်းကိုဖုန်းမဆက်မိခင် အမြန်ပြန်တော့ ရှင့်ကိုမုဒိန်းမှုနဲ့ တရားစွဲမိတော့မယ် .. အမြန်သွား …. မနားနှစ်ဖက်ကိုပိတ်ခါ အော်တော့သည်၊သူ အ၀တ်များဆွဲယူဝတ်ဆင်ကာ အမြန်ဆုံးဆင်းလာခဲ့ရတော့၏ ထိုညကကမ္ဘာ ပျက်သည်ထက်ဆိုးခဲ့သည်ပဲ ……ပြီးပါပြီ။